Uyibona njani iphasiwedi efihliweyo ngamachaphaza okanye ii-asterisks -Ikaro
yokuqalisa >> software >> Uyibona njani iphasiwedi efihliweyo ngamachaphaza okanye ii-asterisks
Ngokuqinisekileyo ngamanye amaxesha Ulibale iphasiwedi kodwa isikhangeli sakho siyasikhumbula nangona sifihlwe ngamachaphaza okanye iiasterisk kwaye ekugqibeleni ugqibela ukuyitshintsha. Ewe, kukho iindlela ezininzi zokubona le-password, ndiyazi zimbini, yiya kukhetho lwesikhangeli sethu ukuze ubone apho igcina khona ipassword kwaye eyesibini yindlela esiza kufundisa ngayo, ilula kwaye inamandla kuba ivumela kuthi ukubona iiphasiwedi ezigcinwe emasimini, oko kukuthi, nangona singakhange sizigcine kwaye kunjalo, azikho kwisikhangeli sethu, siyazibona.
Oku kuluncedo kakhulu ukuba umzekelo usebenza njengeqela kwaye umntu othile ubeka i-API kwifomu, njenge-WordPress, ngale ndlela unokukhawuleza ukuyifumana ukuphinda uyisebenzise kwenye indawo.
Ndikushiya ividiyo ebonisa ukuba ungayenza njani kwaye apha ngezantsi ndicacisa iindlela ezimbini kwifomathi yesiko (umhloli kunye nomphathi wegama eligqithisiweyo lesikhangeli)
Jonga iphasiwedi efihliweyo (Indlela enegalelo)
Ndenza isifundo ngeFirefox, kodwa ukuba usebenzisa iChannel iyafana, sisigama kuphela semenyu esiguqukayo. Nangona kamva ndicacisa indlela yokubona amagama agqithisiweyo agcinwe zizikhangeli, le ndlela igqibe ngakumbi kuba isivumela ukuba sibone amagama agqithisiweyo kwiifom. Makhe ndichaze, xa usebenzisa i-wordpress okanye ezinye izikripthi kukho amasimi ane-apis, njl.njl. Ezikhuselweyo ukuze iphasiwedi ingabonakali. Ngale ndlela uya kuba nakho ukubona ukuba kugcinwa phi nokuba awuyingenanga okanye uyenzile kwenye ikhompyuter.
La manyathelo alandelayo.
Siya apho ipaswedi yethu ikhoyo kwaye ucofe iqhosha lasekunene kwiindawo.
Siza kufumana imenyu kwaye ucofe kuHlola into. Emva koko Umhloli.
Sinqakraza kabini kwiphasiwedi yohlobo = iphasiwedi
kwaye siyitshintsha ibe sisicatshulwa ukuze ihlale ihleli uhlobo = isicatshulwa
Kwaye sele kulo mzuzu uza kubona iphasiwedi eyayifihliwe
Jonga iphasiwedi efihliweyo ngokuya kumphathi wegama lokugqitha
Ukuba usebenzisa iFirefox en malunga: nokhetho # lwangasese uyakubona oku
Sinqakraza kwibhokisi Iakhawunti ezigciniweyo kwaye iwindow ayizukuvela nesiza, umsebenzisi kunye nomhla wokugcinwa kwepasi.
Okokugqibela sinika Bonisa ipaswedi kwaye siza kubona iphasiwedi yendawo nganye. Ilula kakhulu, xa sinendawo yokukhangela engentla singayifumana ngokulula indawo esiyifunayo.
Kwi-chrome iyafana kakhulu masenze chrome: // izicwangciso / iiphasiwedi
Le ndlela isombulula ingxaki yamagama agqithisiweyo esiwagcinileyo, kodwa ngokungafaniyo nale siyichazileyo kwividiyo, ayinakusibonisa amagama agqithisiweyo okanye ii-API ezifakelwe ngabanye kwiinkonzo ezifanayo kwaye zifihlwe luhlobo lwentsimi kunye nepropathi yayo. .
izigaba Ukhuseleko lwekhompyuter, software Ukuhamba kwetikiti
1 amagqabantshintshi "Uyibona njani iphasiwedi efihliweyo ngamachaphaza okanye ii-asterisks"
EyeDwarha 15, 2019 ngexesha 1:26 pm
Icebo elilungileyo. Enkosi!